एकता र संघर्षबाट रुपान्तरण हुन नसकी फुट भयो भने ‘नयाँ आधारमा नयाँ एकता’ नै उत्तम क्रान्तिकारी विकल्प हो – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
एकता र संघर्षबाट रुपान्तरण हुन नसकी फुट भयो भने ‘नयाँ आधारमा नयाँ एकता’ नै उत्तम क्रान्तिकारी विकल्प हो
- क. किरण
अप्रिल २२, अर्थात् २००६ साल बैशाख १० गते भारतको कलकत्तामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरिएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाको विषयलाई लिएर केही विवाद पनि हुने गरेका छन् । यसबारेमा केही स्पष्ट हुन जरुरी पनि छ ।
स्थापना दिवसका बारेमा कतिपयले २२ अप्रिल त कतिपयले १५ सेप्टेबरलाई मनाउने गरेको देखिन्छ । यो झट्ट हेर्दा त्यति ठूलो बिबाद त होइन, तर नेपाली कम्युनिष्टहरुकै बीचमा आफ्नै पार्टीको स्थापना दिवसलाई लिएर विवाद नै खडा हुनु राम्रो कुरा मान्न सकिदैन ।
नेपाली बिक्रम सम्बतअनुसार कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो पर्चा निस्किएको छ बैसाखको दोस्रो हप्तामा । बैसाखको दोस्रो हप्ता २२ अप्रिल भन्दा पछाडि नै आउँछ । पार्टीको स्थापना नै नभएपछि पहिलो पर्चा कसरी निस्कन्छ, त्यो पनि पार्टीको नाममा । पहिलो पर्चा निस्कनु नै पार्टी स्थापना २२ अप्रिलमा भएको हो भन्ने पहिलो प्रमाण र आधार हो । यसले आशंकाको निवारण गरिदिएको छ ।
१५ सेप्टेम्बरमा कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा पत्र निकालियो र तात्कालीन राजनीतिक ब्युरो तथा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयो । १५ सेप्टेम्बरको ऐतिहासिक महत्व यसैमा रहेको छ । पार्टी स्थापना भने २२ अप्रिलमा नै हो ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन २००६ सालबाट सुरु भएर अहिलेसम्मआउँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ७० वर्षको उमेर पार गरिसकेको छ । यो उमेर एक सामान्य मानिसको जीवनभरको समय हो । तर जनवाद, समाजवाद र साम्यवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य बोकेको एउटा कम्युनिष्ट पार्टीका लागि यो ७० वर्षको समय सुरुआतिकै समय हो । पार्टीको जीवनमा यो थोरै समय हो ।
यो समयसम्म हाम्रो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले के के गर्यो त ? भनेको, चिताएको र सोचेको जति त पुगेको छैन, तर यति छाटो अबधिमा यसले केही राम्राराम्रा कामहरु पनि गरेको छ । यस अबधिमा पार्टी निकै उतारचढावको प्रक्रियाबाट गुज्रदै अघि बढिरहेको छ ।
विश्वका कम्युनिष्ट पार्टीहरु जस्तै यसको प्रक्रिया पनि उस्तउस्तै रहन गएको छ । यो आत्मगत र वस्तुगत दुवै कारणले हने गर्दछ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो इतिहासको निकै वस्तुवादी मूल्यांकन गरेर यसको इतिहासलाई एकता–संघर्ष–रुपान्तरण मात्र नभई एकता–संघर्ष–फुटको उतारचढावको संश्लेषणसहित एकता–संघर्ष–फुट र नयाँ आधारमा नयाँ एकता भनेर संश्लेषण गरेको छ ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको महत्वपूर्ण संश्लेषण भनेको पार्टीका फुुट हुन सक्छ, तर गल्ती र कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै फेरि क्रान्तिकारीहरु नयाँ आधारमा नयाँ एकता आउने गर्दछन् । कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियतामा पनि यही हुँदै आएको छ र यही नै लागू भएको छ ।
हामी नेपाली र हाम्रो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास पनि यो कुराबाट अछुतो रहन सकेन र सक्दैन पनि । नेपालको पनि र विश्वका पनि पार्टीको जीवन्तता यसैमा देखिन्छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासलाई सर्सर्ती केलाएर हेर्ने हो भने २००६ साल देखि २०१० सालसम्म महासचिव पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी शानदार रुपमा अघि बढेको पाइन्छ । यो अबधि पार्टी स्थापनादेखि पहिलो अधिवेशनसम्मको अवधि हो । २०१० सालपछि वा पहिलो अधिवेशन पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा टुटफुट, विभाजन र अवसरवादको घुसपैठ सुरु हुन्छ । बिसं. २०१० देखि २०१९ सालसम्म वा तेस्रो महाधिवेशनसम्मको याो अवधि उतारचढावको अवधि रहेको छ ।
के हो संशोधनवाद भनेको ? नयाँ जनवाद र संशोधनवाद एकै ठाउँमा रहन पुगे । अन्तरसंघर्ष चर्कन पुग्यो । पार्टी अन्तर संघर्षमा पुष्पलाल फेरि अघि सर्नुभयो । २०३१ सालसम्म पार्टी राम्रो गरी चल्यो । यसबेलाका उपलब्धीका रुपमा हामीले अध्ययन गर्ने भनेको २०२५ को राष्ट्रिय सम्मेलन, २०२८ सालको झापा बिद्रोह र २०३१ सालको चौथो महाधिवेशन नै हुन् ।
यति बेला सापेक्षतामा क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी धारा अघि बढेको थियो । यसको सिधा अर्थ थियो कि पार्टीभित्र क्रान्तिकारी धारा यति बेलाको समयमा हाबी थियो र विजयी धाराको रुपमा अघि बढिरहेको थियो । मोहनविक्रम सिंह लगायतका नेतृत्व हामी त्यही थियौं ।
त्यसपछि नेताहरुका व्यक्तिगत सनकहरुले पनि काम गरेका छन् । पार्टीमा छलफल, बहस, र विचार संश्लेषणभन्दा पनि टुटफुटहरु आएका छन् । नेताहरुका कारणले विचार गौण भए झैं हुने अवस्था यतिबेला रहन गयो ।
टुटफुटको अवस्था २०४६ सालपछि क्रमशः एकतामा रुपान्तरित हुन थाल्यो । मालेहुँदै एमालेमा मिसिएर संशोधनवादी धारा बन्न पुग्यो । अर्कातिर चौथो महाधिवेशन तथा पुष्पलाल अदि मिलेर क्रान्तिकारी धारा निर्माण हुँदै गयो । एकता केन्द्रमा पनि विचारका हिसाबले निकै बहस चल्यो । एकता, संघर्ष रुपान्तरणको सट्टा फेरि फुट भयो । तर फुट पछि पनि बहुमत हिस्सा महान् दीर्घकालीन जनयुद्ध थालनी गरेर अगाडि बढ्यो । २०५२ देखि २०६२, ०६३ को बीचमा क्रान्तिकारीहरु बीच ध्रुबीकरणको प्रक्रिया तिब्र भयो र क्रान्तिकारी धाराले निकै गति लियो ।
तर २०६२, ०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पुग्दा जनयुद्ध भताभुङ्ग भयो र संशोधनवादी तथा संसदवादीहरुसँग सहकार्य अघि बढ्यो, शान्ति प्रक्रियाका नाममा । जनयुद्धको एक कालखण्डमा देश र जनताका पक्षमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु शान्ति प्रक्रियाको अर्काे काल खण्डमा आउँदा बिग्रिएर गए । हालको अवस्थामा प्रतिक्रियावादउन्मुख दक्षिणपंथी संशोधनवादी र नवसंशोधनवादीहरु बहुमत हिस्सामा छन् भने क्रान्तिकारीहरु अल्पमत र सानो हिस्सामा रहेका छन् ।
देशको यस्तो वस्तुगत र आत्मगत स्थितिलाई मध्यनजर गरेर एकता, संघर्ष, फुट र पलायनको वर्तमान अवस्थामा नयाँ आधारमा नयाँ एकता मार्फत् ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन युक्ति संगत तथा वस्तुसंगत दुवै हुन्छ । विगतको ध्रुवीकरणलाई फर्केर हेर्ने हो भने केही नेताका ‘सनक’ले पनि काम गरेका छन् । २०४८ सालको ध्रुवीकरणमा मोहनविक्रम सिंह ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा आएनन् ।
अहिलेको २०७५/०७६ सालको ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा पनि केही नेताहरुको ‘सनक’ को छनक देखिन्छ । मोहनविक्रमको हालको दस्तावेजमा नयाँ जनवाद र दीर्घकालिन जनयुद्धको बाटो भनि व्याख्या गरेको पाइन्छ । तर विचार बहसमा खुलेर अगाडि आउन सकेको देखिदैन । तथापि, क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको प्रक्रिया भने अगाडि बढि रहेको छ । हाल यसको नेतृत्व क्रान्तिकारी माओवादीले गरिरहेको छ ।
कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियहरु तथा देश विशेषका आन्दोलनहरु संसारभर यही प्रक्रियामा छन् । फुट्ने मात्र होइन, जुट्ने र अघि बढ्ने कुरा एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको जीवनको प्रक्रिया हो । क्रान्ति भनेको रेलको यात्रा जस्तै हो । रेल चलिरहन्छ, यात्रुहरु चढ्ने र झर्ने गरिरहन्छन् ।
तर एक कुशल र प्रतिबद्ध क्रान्तिको चालक भने अन्तिम गन्तव्यमा नपुग्दासम्म रेलको इञ्जिनलाई चलाइरहन्छ । अब क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीले अबलम्बन गरेको कार्यदिशा अनुसार संघर्षलाई अघि बढाउँदै वचारलाई थप विकसित र समृद्धीकरण गर्दै लेनिनका बारेमा बढी पढ्न र बुझ्न आवश्यक रहेको छ ।